JIMCADII BREXIT?: Britain waxay ahayd inay maanta baxdo waa se baaqatay! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka JIMCADII BREXIT?: Britain waxay ahayd inay maanta baxdo waa se baaqatay!
JIMCADII BREXIT?: Britain waxay ahayd inay maanta baxdo waa se baaqatay!
(London) 29 Maarso 2019 – Maanta waa Jimcihii 2 sanadood kahor loo muddeeyay inay Britain macasalaamayso xafiisyada Brussels, oo ay ka baxdo ururka Midowga Yurub, mase dhicin.
Maarso 29, 2019 waxay ahayd astaan ay u mashxaradeen siyaasiyiintii riixayay mashruuca Brexit iyo intii u codaysay, sidoo kalena ay muusanoow ku qaabileen intii ka codaysay ee doonaysay in laga sii mid ahaado Midowga Yurub.
Waxaa la agaasimey xaflado qaali ahaa oo lagu maamuusayay wax ay dadka qaar ku tilmaamayeen ”Britain oo xornimo qaadatay.”
Iminka, eedda qaarba halla saaro tala xumada RW Theresa May oo ugu dambayn ku guul darraysatay in ay baarlamanka ka hesho ansixinta heshiiska Brexit, maantu uma qurxoona qaabkii ay u sawirayeen qoladii u ololaysay in Britain ay MY ka baxdo.
Waxa qura ee cadi maanta waa in aan Brexit maanta oo Jimce ah dhacaynin — iyo xitaa bisha soo aaddan ama xitaa Maajo, balse laga yaabee muddo sanad gudihii ah, sidoo kale lagaba yaabee in Britain aanay abidba Midowga Yurub ka bixin.
Previous articleAFAR MAANLAAWE: Dowladda, Ciidamada, Mucaaradka & Shacabka (Akhri su’aalaha horyaalla)
Next articleQM oo markale Kenya uga digtey celinta qaxootiga Soomaaliyeed (3 qodob oo lasoo jeediyay)